ကျေးဇူးတင်ပါသည် ဂျပန်ပြည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » ကျေးဇူးတင်ပါသည် ဂျပန်ပြည်
Posted by အညာတမာ on Jun 17, 2012 in Opinions & Discussion, Politics, Issues | 19 comments
ယနေ့ လက်ရှိပြောင်းလဲနေတဲ့ မြန်မာ့နိုိင်ငံရေးအပေါ် နိုင်ငံတကာမှ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်သော အသင်းအဖွဲ့များ၊ ထင်ရှားကျော်ကြားသောလူပုဂ္ဂိုလ်များ…စသော.. စသော နယ်ပယ်စုံအသီးသီးမှ အပြုသဘောဆောင်သော၊ အကောင်းမြင်သော ကြိုဆိုမူများကို တွေ့ရ၊ မြင်ရ၊ ကြားနေရပါတယ်။ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများ၊ ပြည်တွင်းရှိ မြန်မာဂျာနယ်များတွင်လည်း ဤနိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲအပေါ် နိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်ပြုမူများကို အလေးပေး ရေးသားလာတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း ဤပြောင်းလဲမူသည် နှေးကွေးလွန်းသည်ဟု ဝေဖန်နေပေမဲ့ အပြုသဘောဆောင်သော လက်ခံမူများကိုတွေ့နေရပါတယ်။ တစ်နှစ်သားကျော်ကျော်သာရှိသေးသော မြန်မာ့နိုိင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းအပေါ် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ တုန့်ပြန်မူကိုတော့ လေးစားရမည်ဟုပြောလိုပါသည်။
ကဲ…ကြည့်ရအောင် ဘာကြောင့်လေးစားစရာ ကောင်းရတာလဲ။
ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးလှထွန်းက မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ပေးရန်ရှိသော ကြွေးမြီစုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၁၁၀၂၃.၂၉၈ (Over 11 billion) ရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ တဆက်တည်း ၀န်ကြီးက ချေးငွေအများဆုံး ပေးဆပ်ရန်ကျန်ရှိသောနိုင်ငံမှာ ဂျပန်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၆၃၈၈.၃၂၀ (Over6billion) ရှိပြီး ဒုတိယချေးငွေအများဆုံး ပေးဆပ်ရန်ကျန်ရှိသော နိုင်ငံမှာ တရုတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ၊် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၂၁၃၁.၇၄၄ (Over2billion) ရှိပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံဟာ အဲဒီ ၆ ဘီလီယံကျော်ကျော် ကြွေးမြီတွေထဲကမှ ကြွေးမြီဒေါ်လာ ၃.၇ ဘီလီယံကို ဧပြီလထဲက သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်းမှာ လျှော်ပစ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ပြီး နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးရေး အကူအညီသစ်များစတင်တော့မည်ဟုဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မြန်မာနိုိင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ရေရှည် ရှင်သန် ထွန်းကားဖို့ နဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုရင် ကြွေးမြီတွေရှိနေခြင်းကလည်း အတားအစီးတစ်ခုလုိ့မြင်ပုံရပါတယ်။ ပြီးတော့ ကြွေးမြီဟောင်းတွေကများနေတော့ ချေးငွေအသစ်ရှာရတဲ့အခါမှာလဲ အခက်အခဲတွေဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံဟာ များလွန်းနေတဲ့ကြွေးမြီဟောင်းတွေထဲက သူတတ်နိုင်သလောက်ကို လျှော်ပစ်ခဲ့တာပါ။ ကိုင်း…ဂျပန်နိုင်ငံကလွဲလို့ တစ်ခြားဘယ်နိုင်ငံကမှ အဲဒီလောက်လက်တွေ့ကျတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ပေးသေးပါဘူး။ ကြွေးသစ်တာ ပေးချင်ပေးမယ် ကြွေးမြီဟောင်းလျှော်ပစ်တဲ့ တိုင်းပြည်မရှိသေးပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ ဂျပန်လူမျိုး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ထားတဲ့အမြင်လေးနဲ့ အားဖြည့်ချင်ပါတယ်၊ သူဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ လာလာနေရတာ ၂၂ ကြီမ်ရှိပါပြီ၊ ဒါပေမယ့် ဒီ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ နဲ့ ဇွန်လ ဒုတိယပတ်မှာ ရောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ၂ ခေါက်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ အခေါက်ရေ ၂၀ နဲ့စာရင် နေရာတော်တော်များများမှာ အချိန်တိုအတွင်း သူမယုံနိုင် လောက်အောင်ကို တိုးတက်နေပါတယ်လို့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ နောက်ပြီး သူဟာ ဂျပန်အစိုးရကိုလည်း ဒီလိုပြောပါသေးတယ်။ သူတို့ ဂျပန်အစိုးရဟာ ဒေသတွင်းရှိ အထူးသဖြင့် အာဆီယံတိုင်းပြည်တွေကို စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် နည်းပညာအကူအညီတွေ ပေးနေကြောင်း၊ ဒီလိုပေးရာမှာလည်း အလှည့်လိုက်ဖြစ်ကြောင်း၊ အလှည့်လိုက်ပေးရချင်းမှာလည်း တနိုင်ငံတည်းကိုသာ အာရုံစူးစိုက်လို၍ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီနှစ်တွေမှတော့ မြန်မာနိုင်ငံအလှည့်လို့ ထင်ကြောင်း၊ ဒါကြောင့်သာ ကြွေးမြီများကိုလျှော်ပစ်တယ်လို့ထင်ကြောင်း၊ သူ့နေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လတ်တလော အဓိကလိုအပ်နေတဲ့ အရာတွေဟာ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံကြီးတွေမဟုတ်ပဲ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေဖြစ်တဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး တွေကို ခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်အောင် တည်ဆောက်၊ ပြုပြင်၊ လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းပါက ကုန်စည်စီးဆင်းမူမလွယ်ကူနိုင်သလို၊ ပညာရေး နှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မူ မကောင်းပါက လူသားအရင်းအမြစ်ကိုသာ အားထားရသော နိုင်ငံတနိုင်ငံအတွက် အရာနောက်ကျကျန်ရစ်နေမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံဟာဆိုရင်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိကလိုအပ်နေတဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ တည်ဆောက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာသာ ပို၍ ကူညီထောက်ပံ့ပေးမယ်ဟုထင်ကြောင်း၊ သူ့ရဲ့အမြင်ကို သိခဲ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့်…ရွာသူ၊ ရွာသားတွေရော ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရကို ကျေးဇူးတင်သင့် မတင်သင့်….ထောက်ပြဝေဖန်ကျပါအုံးဗျို့……….။
has written 8 post in this Website..
View all posts by အညာတမာ →
ဆိုခဲစေ မြဲစေပေါ့ တချို့အရာတွေက ကျနော်တို့ လက်လှမ်းသိပ်မမှီတော့ စောစော ကျေးဇူးမတင်သင့်ပါဘူး ကျနော့်အမြင်ပါ လယ်ဝေးဘက်မှာ အစိုးရက အရပ်သားတွေကို Metallurgy ဘွဲ့လွန်တက်ခိုင်းပီး တိုင်တေနီယမ် Research တွေလုပ်ခိုင်းတော့ ဂျပန်က နည်းပညာ စက်ကိရိယာတွေ အများကြီးပေးပါတယ်။ မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာ အပြောပါ အများကြီး အကျိုးအမြတ် ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဆိုတော့ အကြွေး၆ဘီလီယံကို ဒီအတိုင်းတော့ လျှော်ပစ်မယ် မထင်ဘူးဗျ။ နောက်ကွယ်မှာ မမြင်ရတဲ့ ဆက်စပ်မှုတွေ ရှိမယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရန်ကုန်မှာ.. ဂျပန်က.. တီဗီတာဝါတိုင်လာထောင်.. တီဗီစနစ်လုပ်ပေးပြီး.. မြန်မာဟာ.. ကမ္ဘာတန်းတီဗီရုပ်သံလွှင့်စနစ်ရခဲ့တယ်..။ ဂျပန်တွေ အလကားလုပ်ပေးတာပါ..။
သူများနိုင်ငံတွေလို.. အဖြူအမဲခေတ် မကြုံလိုက်ရပါဘူး..
မြန်မာတွေ.. အိမ်နီးနားချင်းအာရှတွေလို.. PAL, NTSC(US) , SECAM စနစ်တွေမဖြစ်ပါဘူး.
ဂျပန် NTSC ဖြစ်ပါတယ်..
ဂျပန်တီဗီပဲ.. မြန်မာတနိုင်ငံလုံး..ဆက်သုံးကြရတော့တာပေါ့..။ အဲဒီကနေ.. ဂျပန်တီဗီရောင်းရငွေက.. တာဝါတိုင်ဆောက်တာ.. စနစ်အတွက်ရင်းနှီးပေးတာ.. မက.. အများကြီးပိုပြန်ရပါတယ်..။
win win situation ပါပဲ..။
စကားမစပ် အသစ်လာလတ္တံ့သော နစ်ခေဲး ခိဂယော တွေ နဲ့ပါတ်သတ်ပီး
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း အသစ်တွေ ဖော်ဆောင်ချင်ရဲ့ဗျာ..
ဂယ်ပါ ဟိုနေ့က ပန်ပန့်ကိုနောက်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး…
အဲ့ဘက် လှည့်ဖြစ်တဲ့အခါ ရေးတင်ပါ့မယ်ဗျာ
၂၂ကြိမ်လာတဲ့လူ ရဲ့ နာမည်လေးသိချင်သားဗျာ
ဂျပန်အကြွေးလျှော်ပြီးနောက်မှာ မှ ကားတင်သွင်းခွင့်တွေကို လွှတ်လိုက်တာတွေ့ ရတယ်
ဂျပန်ရဲ့ ကားဟောင်းတွေ ဘယ်နိုင်ငံက ၀ယ်သေးလဲ ???
စစ်လျှေကြေးပေးတုံးက ဟီးနိုး ကားတွေမြန်မာပြည်စရောက်ခဲ့တာမှတ်မိသေး(၁၉၆၅လွန်ကာလ..မှားနိုင်)
win win situation ပါ။
win Lose situation တတ်နိုင်သလောက်ရှောင်နိုင်အောင်….လွှာသုံးကြရမှာပေါ့လေ
ဖတ်ရှု့အားပေးတွေးခေါ် လိုက်ပါတယ် ဆရာရေ့
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မြန်မာနိုိင်ငံရဲ့
ဒီမိုကရေစီစနစ် ရေရှည် ရှင်သန် ထွန်းကားဖို့ နဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုရင် ကြွေးမြီတွေရှိနေခြင်းကလည်း
>>>ကိုရဲစည်ရေ…နောက်ကွယ်မှာ မမြင်ရတဲ့ ဆက်စပ်မှုတွေ ရှိမှာပါ။
>>>ကျေးဇူးပါသဂျီးမင်း နှိုင်းကြည့်နိုင်အောင် တင်ပြပေးသည့်အတွက်။
>>>ရပါတယ် ဂီဂီ…သူ့နံမည်က Tansri Fumihiko Konishi ပါ။ မလေးရှားမှာနေတဲ့ ဂျပန်တယောက်ပါ၊ ပြီးတော့ Texchem Investment Holding ရဲ့ Chairman ပါ။ http://www.texchemfamilycare.com အဲဒီမှာလည်း ၀ါသနာပါရင် ၀င်ရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။
>>>MTY ရေ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ကျနော့် အသိုင်းအ၀ိုင်းက မဟုတ်…
ဘယ်သူနဲ့ သိနိုင်လည်း တော့ မှန်းမိ …
ဒေတာနဲ့ အင်ဖော်မေးရှင်း အတွက် ကျေးကျေးပါဗျား ….
စိုးရိမ်မကင်း(ဆနွင်းမကင်းလောက် လက်တွေ့စားမရ) တွေဘဲအော်မနေ
ကြဘဲ လက်တွေ့ ထိရောက်တဲ့ ဆနွင်းမကင်းလို ချက်ချင်းစားလို့ရတဲ့
ဝေဘန်လေကန်မနေဘဲ အနီးဆုံးကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင်ကစလို့ တိုင်းပြည်အတွက်
ထိရောက်မဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်လေးတွေကို ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆို
ကျုပ်တို့ ရောက်ချင်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီခေတ်သစ်ကြီးဆီ အမြန်ရောက်နိုင်မယ်ဖြစ်ကြောင်းပါဗျာ..
သဂျီးပြောသလို `သူအကျိုးရှိ ကိုယ်အကျိုးရှိ´
အခုဆိုရင် ကမ္ဘာမြေလေ့လာရေးဂြိုလ်တု ဆိုတာဂျီးတောင် အလဂါးတင်ပေးတော့မှာဒဲ့
ဝမ်းသာစရာဂျီးဗျားးးး အောင်မလေးးး ကျေးဇူးတင်တာဟဲ့ ကိုရွှေဂျပန်ရဲ့
တခြား တိုင်းပြည်တွေရဲ့ အကူအညီတော့ မသိဘူး ဂျပန်တွေ အကူအညီပေးတာကတော့ ဟိုးအရင်တုန်းကထဲကပါ။
ဥပမာ ကျမတို့ ဆီက ပုလဲ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းဆိုတာ ဂျပန်တွေ နည်းပညာပေးပြီး ပျိုးထောင်ပေးခဲ့တာပါ။
နောက် မေမြို့က လိပ်ပြာပြတိုက်ဆိုတာလည်း ဂျပန်ကပဲ နည်းပညာပေးပြီး ထူထောင်ပေးခဲ့တာပါ။
နောက် နာမည်ကြီး ဘီလူးချောင်းရေအားလျှပ်စစ်ဆိုတာလည်း သူတို့ ပဲ ကူညီပေးခဲ့တာပဲလေ။
အဲ…. ဒီနေရာမှာ ကြုံလို့ ပြောရရင် ဘီလူးချောင်းက ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်တာ ရေပေါက် ခပ်သေးသေးနဲ့ ရေအားခပ်နည်းနည်းကိုပဲ သုံးပြီး လျှပ်စစ်အားများများ ထွက်အောင် လုပ်ပေးခဲ့တာ။
ရဲရွာက ချိုင်းနီးစ်တွေ လုပ်ပေးခဲ့တာက ရေပေါက် ဧရာမကြီးတွေနဲ့ ရေအား အများကြီး ဖြုန်းပြီး လျှပ်စစ်နည်းနည်းပဲ ထွက်အောင် လုပ်ပေးခဲ့တာ။ ကွာတာကို ပြောပြတာပါ။
ပြောတော့သာ ပြောတယ် ပြောတာ။
နောက် လူမှုပရဟိတ အသေးစားတွေက စလို့ တချို့ အကြောင်းအရာ တော်တော်များများလည်း အကူအညီပေးခဲ့တာပါ။
သူတို့ အတွေးကတော့ တခါက ရွာလူကြီး တယောက် ပြောသလို စစ်အတွင်းက အမှားတွေကို ပြန်ပြီး အစားပြန်ပေး ကူညီပေးပြီး ၀န်ချတောင်းပန်လိုတဲ့ စိတ်ကြောင့် ဖြစ်မှာပါ။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကူညီပေးတဲ့သူဆိုတော့ ကျေးဇူးတင်လိုက်လို့လည်း ဘာမှ ပွန်းပဲ့သွားတာမှ မဟုတ်ပဲ။
ဒါပေမဲ့ ခုနောက်ပိုင်း သိပ်မကြာသေးခင်က ဆေးရုံတခုရဲ့ မြှုပ်နှံမှုမှာတော့ အတော်လေး အသံထွက်ခဲ့ပါတယ်။
လူတိုင်းကတော့ အကောင်းချည်းပဲလို့တော့ ဘယ်တွက်လို့ ရမလဲလေ။
သူကြီးပြောတဲ့ win-win ဆိုတာလေးကလည်း အထူးအာရုံစိုက်ရမဲ့ အထဲ ပါပါတယ်။
မယ်ပုပြောသလိုဘဲ ဂျပန်က သူတို့စစ်တွင်းက အမှားတွေအတွက်ဘဲလားတော့ မသိဘူး။
မြန်မာပြည်ကို နည်းပညာ အကူအညီပေးလာတာ တောက်လျှောက်ပါဘဲ။
သူတို့လည်း လောကီသားတွေမို့ မားကက်တင်းမာယာနဲ့ ပေးတာလည်း ရှိနိုင်ပေမယ့်
အနောက်ကမ္ဘာက sanction လို့ ဖြတ်တောက်ထားချိန်မှာတောင် သူတို့ရဲ့ အကူအညီတွေ ရပ်မပစ်ပါဘူး။
1985 လောက်က JICA ဆိုတဲ့ အဖွဲ့က ဆောက်ပေးထားတဲ့ ရန်ကုန်ဆေးရုံသစ်ကြီး ခုထက်ထိ သုံးနေရပါတယ်။
အကူအညီပေးတာကို ဂျပန်သတင်းထောက် အသတ်ခံရလည်း မရပ်ခဲ့ဘူး။ဂျပန်မလေး သတ်ခံရလည်း မရပ်ခဲ့ဘူး။
AOTS (The Association of Oversea Technical Scholarship) ဆိုတဲ့ ဂျပန်အစိုးရတစ်ပိုင်းပါတဲ့ အဖွဲ့က မြန်မာအပါအ၀င် တတိယနိုင်ငံတွေကို ပေးနေတဲ့ နည်းပညာသင်တန်းတွေဟာ မျှော်လင့်ချက်မပါတဲ့ ကူညီမှုတွေလို့မြင်ပါတယ်။
AOTS training course တွေမှာ သင်တန်းသားတွေကို ဟိုတယ်မှာ အစားအသောက်ကျွေးတဲ့အပြင် နေ့တွက်စားရိတ်တောင် ပေးပြီး သင်ပေးတာပါ။အဲဒီအတွက် ဘာမှ တုန့်ပြန်ပေးစရာ မလိုပါဘူး။
ဒါကြောင့် ကျမကတော့ ဂျပန်အစိုးရနဲ့ပြည်သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
AOTS (The Association of Oversea Technical Scholarship) ဆိုတဲ့ နည်းပညာသင်တန်းတွေ
သွားတက်ကြတာ မြန်မာနိုင်ငံက တက်တဲ့သူတွေက တခြားနိုင်ငံလိုမဟုတ်ဘူး။
ပညာရှင်တွေတက်စေချင်လို့ ခေါ်တာ ရွေးချယ်ရေးက ဘယ်လိုစနစ်နဲ့ ရွေးသလဲမသိဘူး။
လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့သူဌေးတွေ အပျော်ခရီး သွားသလားလို့မေးရမလိုဖြစ်နေတယ်။
ပညာရှင်တွေသွားရင် ပြန်မလာမှာစိုးလို့ တဲ့။
နိုင်ငံတော်အကျိုးရှိအောင်၊AOTS ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်အောင်
AOTS (The Association of Oversea Technical Scholarship) ဆိုတဲ့ နည်းပညာသင်တန်းတွေ ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံ မှာဘဲ သင်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ တခြားနိုင်ငံအပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းသင်ပေးပါတယ်။
AOTS alumni အသင်းဖွဲ့ တော့ AOTS ဂျပန်ပြန်ကျောင်းသားဟောင်းများအသင်းလို့ဆိုပဲ။
အရင်က ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ ကျူးကျော်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေထဲမှာ ၊ ကိုယ့်ကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ နိုင်ငံတွေ ကို အကောင်းဆုံး ပြန်ပေးဆပ်တာ ဂျပန်လို့ ထင်တာဘဲဗျာ ။
ဘယ်သူကဘာကြောင့်အနီပေးတာလဲ ?? မှားနေလို့လား.. နားမလည်လို့။
the best ပြောတာမှားနေလား…တစ်ကယ်မသိလို့ပါ ဒါဆိုလဲအမှန်ပြန်ရေးပြသင့်တယ်။
ကျမလည်း ကျေးဇူးတင်ပါသည် ဂျပန်ပြည်။
နောက်ကွယ်က အကြောင်းတွေရှိနိုင်ပေမယ့် အခုလို win win situation အနေအထားကို ရနိုင်တာကိုက ကျေးဇူးတင်စရာ ဖြစ်နေပါပြီ။